Top 10 cốc tập uống dành cho bé yêu tốt nhất mẹ nên lựa chọn năm 2022 | Muasalebang - Muasalebang
Top 10 cốc tập uống dành cho bé yêu tốt nhất mẹ nên lựa chọn năm 2022 | Muasalebang
Đang Đọc: Top 10 cốc tập uống dành cho bé yêu tốt nhất mẹ nên lựa chọn năm 2022 | Muasalebang in Muasalebang
Ingabe ufuna umkhiqizo? ukuphuza indebe yengane uyalithanda ikhaya lakho? Uyazibuza ukuthi yiluphi uhlobo lomkhiqizo ongalukhetha ukuze uqinisekise ukuhlonishwa nekhwalithi. Bese usulitholile ikheli elilungile. Ngokuqeda ukufunda lesi sihloko uzokwazi ukuthi yimiphi imikhiqizo emihle emakethe namuhla. Ngesikhathi esifanayo, ungakwazi futhi ukuqhathanisa amamodeli, imiklamo kanye namanani ukuze ukhethe umkhiqizo ofaneleka kakhulu.
Nakhu okuqukethwe engikuhlanganisile mayelana nezinkomishi zokuphuza ezihamba phambili ezingu-10 zezingane. Ake silandele.
1 Iyini inkomishi yokuphuza?
1.1 1. Indebe Yangempela Yokuphuza yaseJapan Richell
1.2 2. I-Fisher Price FP201249 inkomishi yokuphuza – 250ml
1.3 3. Tommee tippee 360. inkomishi yokuphuza
1.4 4. I-MAG PIGEON Drinking Cup (180ML)
1.5 5. Inkomishi yokuphuza ye-UPASS enezibambo ezi-2
1.6 6. I-MUNCHKIN Drinking Cup
1.7 7. LATCH MUNCHKIN inkomishi yokuphuza
1.8 8. Philips – Avent .Drinking Cup
1.9 9. I-DISNEY Drinking Cup
1.10 10. I-Farlin Drinking Cup
Iyini inkomishi yokuphuza?
Ingane yakho isingenile esikhathini sokulunyulwa futhi isizoyeka ngokuphelele ukuncelisa. Ngalesi sikhathi, umntwana udinga ukwengezwa ngenani elifanele lamanzi ngokuqhubekayo ukuze abuyisele amanzi obisi lwebele. Ungajahi ukunikeza ingane yakho amanzi ngenkomishi evamile noma inkomishi. Izingane ezisafunda ukuphuza zisadidekile, ngakho kulula ukuminyanisa, okungase kuphazamise izimpande zamazinyo nezinsini. Izingane ezincane ezinalesi simo zizoholela kalula ekwesabeni lapho ziphuza amanzi ngokuzayo, okwenza kube nzima kubazali ukukhulisa izingane. Inkomishi yokuphuza iklanyelwe ukuhambisana nolwanga nomhlathi wengane encane, okwenza kube lula ngezingane ukuzibamba nokuzijwayeza imikhuba yokuphuza yansuku zonke. Izinkomishi zokuphuza zibuye zisize abazali bonge isikhathi esiningi lapho benakekela izingane zabo. Bheka imikhiqizo engezansi.
1. Indebe Yangempela Yokuphuza yaseJapan Richell
Umzimba wendebe: ipulasitiki ye-PP yekhwalithi ephezulu iphephe ngokuphelele kubantwana
Utshani: i-silicone yekhwalithi ephezulu
Imahhala ye-BPA nezinye izinto eziyingozi.
Izigaba ezintathu zokusiza izingane zifunde ukuphuza amanzi nge-Japanese Richell 3-Stage Drinking Cup:
Isiteji 1 (ingane enezinyanga ezi-4-6): Lesi yisiteji lapho izingane zijwayela ukumunca i-reflex: I-valve ejector yamanzi iwukusungulwa okuyingqayizivele kuka-Richell, umama udinga nje ukucindezela inkinobho ethi PUSH esivaloni senkomishi ukuze aphushe ukugeleza kwamanzi. Ukwenyuka kancane kwepayipi lokumunca ukuthi ingane ingakwazi ukuphuza, lokhu kuzosiza ukuqeqesha ingane ukuncela i-reflex ngokushesha. Qaphela: Isivalo senkomishi kufanele siqine.
Isiteji sesi-2: (ingane esukela ezinyangeni eziyisi-6-9, ingane isebenzisa utshani): Yakhelwe ngezibambo ezincane nezibanzi nhlangothi zombili, izingane zingakwazi ukuzibamba ukuze zimunce amanzi. Baby usebenzisa utshani. I-silicone straw, i-elliptical circumference ilingana nomlomo wengane, okwenza kube lula futhi kuhlanzeke ukuthi ingane iphuze.
Isigaba 3 (izinyanga ezingu-9 ubudala, izingane ziphuza njengenkomishi yabantu abadala): Susa isivalo bese ingane isisebenzisa njengenkomishi enezibambo ezi-2.
Inkomishi yokuphuza yaseJapane i-Richell yezigaba ezi-3 ithathwa njengenkomishi yaphezulu esiza izingane ukuthi zijwayelane kalula namanzi okuphuza ngendlela elula ngaphandle kokudala ingozi noma ukuminyanisa izingane. Lolu uhlobo lwenkomishi omama abaningi baseJapane abathembela ukuyisebenzisela izingane zabo.
2. I-Fisher Price FP201249 inkomishi yokuphuza – 250ml
Inesibambo ukuze ingane yakho ibambe kalula.
Ifanele izingane ezingaphezu kwezinyanga eziyisi-6 ubudala.
Imibala ehlukahlukene: Pink, Red, Blue.
Inkomishi ethambile ye-silicone teat isiza ingane yakho ukuthi ishintshe isuka ebhodleleni iye kwelinye.
Ukusetshenziswa: Inkomishi yetiye ye-silicone ethambile, isiza ukushintsha kwengane isuka ebhodleleni iye kwenye. Isibambo senza kube lula ngengane ukuba izibambe yodwa. Ifanele izingane ezingaphezu kwezinyanga eziyisi-6. Izikhombisi-ndlela: Cwilisa emanzini abilayo imizuzu emi-5 ngaphambi kokusetshenziswa kokuqala. Thela amanzi amancane noma ubisi enkomishini, vula isivalo usiqinise, vumela ingane yakho isibambe futhi izijwayeze ukuphuza yodwa. Hlanza ngesisombululo sokuhlanza bese ugeza ngamanzi afudumele ngemva kokusetshenziswa. Umshini wokuwasha izitsha uphephile, iwashi eliphezulu.
Isexwayiso: Gcina kude nomthombo wokushisa, ilanga eliqondile. Ungawabilisi amanzi, ungawasebenzisi ku-microwave. Ungavumeli ingane yakho iphuze ngenkathi igijima. Ungayivumeli ingane yakho ukuthi imunce izixazululo ezinoshukela isikhathi eside, ezingase zidale ukubola kwamazinyo. Sebenzisa ngaphansi kokugadwa kwabantu abadala. Landela imiyalelo efanele yokuhlanza nokuvala inzalo.
3. Tommee tippee 360. inkomishi yokuphuza
Isetshenziselwa izingane ezisukela ezinyangeni eziyi-12
Iklanyelwe ngokukhethekile ukusiza ingane yakho ukuthuthukisa amakhono okuphuza
Ingane yakho ingaphuza kunoma iyiphi indawo eduze konqenqema lwengilazi
I-valve inesakhiwo esilula, esiwucezu olulodwa okulula ukusihlanza
Ukuvimbela ukuchitheka kwegazi ngisho nalapho ukhipha
Isivalo senkomishi silingana kahle ukugcina yonke into ihlanzekile futhi yomile
I-valve inesakhiwo esilula, ucezu olulodwa, kulula ukuyihlanza
Izici zengilazi yokuphuza ye-Tommee Tippee 360o engachitheki:
Gxuma nxazonke! I-Tommee Tippee 360o Drinking Glass imelana nokuchitheka ngisho noma ibheke phansi.
Sebenzisa njengengilazi yokuphuza evamile ngaphandle kwe-spout noma utshani, okunconywe odokotela bamazinyo ukusekela ukuthuthukiswa komlomo okunempilo nokukhuluma.
Nge-Tommee Tippee 360o Drinking Cup, ingane yakho ingaphuza noma yikuphi ku rimu – njengengilazi ephuzayo yabantu abadala.
4. I-MAG PIGEON Drinking Cup (180ML)
– Umbala: Igolide
+ Umzimba webhodlela nesivalo: Ipulasitiki ye-PP
+ Ikhanda lokudonsa: I-Silicone
– Umthamo: 180ml
– Iminyaka yobudala: Ezinganeni ezinezinyanga eziyi-8 nangaphezulu
– Umkhiqizi: Ijuba
– Umsuka womkhiqizo: Japan
– Indawo yokukhiqiza: Indonesia
Inkomishi yotshani iyinto ebalulekile ezinganeni uma zisuka ekunceliseni ibhodlela ziye esigabeni sokuphuza. Ngakho-ke, iPigeon iyakuqonda ukukhula kwamathole esigabeni ngasinye, ngakho-ke yenza ucwaningo ngendebe yotshani ye-MAG MAG.
– Inkomishi yotshani ye-MAG MAG yenziwe ngepulasitiki yekhwalithi ephezulu ye-PP, ayinayo i-BPA futhi imelana nokushisa kufika ku-120 degrees Celsius, ilungele ukuvala amagciwane ngaphandle kokuthinta impilo yengane.
– Idizayini ethambile ye-silicone yotshani, ifanele izinsini namazinyo engane, futhi ingena kahle, ifanele umlomo omncane wengane.
– Isibambo siklanyelwe ukuba sibe sincane, sifanele isandla somntwana, sisize umntwana ukuba asibambe siqine ukuze agweme ukuwa.
5. Inkomishi yokuphuza ye-UPASS enezibambo ezi-2
Iminyaka yobudala: eyezingane ezisukela ezinyangeni eziyisi-6 kuya phezulu.
– Ingono ye-silicone ethambile ilungele umlomo wengane.
– Ivumela inzalo ngesitimu, i-microwave noma amanzi abilayo.
– Kwenziwe eThailand
I-Upass UP0623Y – I-Pink (200ml) Drinking Cup yenziwe ngezinto zepulasitiki eziphephile ezingenazo i-BPA, abazali bangaba nesiqiniseko sokuthi bazothengela izingane zabo amanzi ukuze ziphuze.
Kukhona imininingwane ehlekisayo ebhodleleni ukuze udale umuzwa othakazelisayo wengane njalo lapho ephuza.
Isibambo sepulasitiki esikahle sezingane ukubamba ibhodlela ukuze ziliphuze kunoma iyiphi indawo. Izingane zingakwazi ukuphuza amanzi ngokuphepha ngokwazo, omama bangaqiniseka ukuthi bazosebenzisa ukuzimela kusukela esemncane.
I-silicone straw ethambile kakhulu ifakwe isikhiya esingavuzi esivimbela amanzi ukuthi angavuzi lapho ibhodlela litshekile noma libheke phansi.
Umsebenzi wokuvula ulula, vele ucindezele inkinobho ethi “PRESS” kancane. I-straw izovela lapho isivalo sivuliwe.
6. I-MUNCHKIN Drinking Cup
Izingane ezisukela ezinyangeni eziyisi-6+ zingazijwayeza amakhono ayisisekelo njengokumunca amanzi zodwa, ukuphuza amanzi zodwa.
Ukuze ingane ifunde ikhono elisha “lokubamba ingilazi yamanzi” ngokushesha futhi kulula, izinja ezintathu zithole ingilazi yokuphuza.
Umkhiqizo uphephile ezinganeni (i-BPA ngokuphelele mahhala).
Incane, ifanele izandla ezincane, ngakho-ke kulula ukuba izingane zibambe.
Ingachitheki ngokuphelele, ingachitheki, ukuze abazali baqiniseke ukuthi ingane ingakwazi ukuzilolonga futhi iziphathe ngokwazo.
Umlomo wenkomishi engu-360 uvumela ingane yakho ukuthi iphuze kunoma yiluphi uhlangothi lwenkomishi.
Amanzi aziphumela ngokuzenzakalelayo lapho umntwana ebeka umlomo wakhe eceleni kwenkomishi futhi ephuza futhi avele ame ngokuzenzakalelayo lapho umntwana eyiyeka.
I-valve ingakhishwa ukuze ihlanzwe kalula ngokudonsa inkinobho ephakathi ibheke phezulu.
Inkomishi ayinayo i-spout, ngakho ilungele izinsini namazinyo ezingane.
Kunemibala emi-4 emihle yezingane (epinki, ewolintshi, eluhlaza okwesibhakabhaka noluhlaza okwesibhakabhaka).
7. LATCH MUNCHKIN inkomishi yokuphuza
Izinto eziphephile, ezingena-BPA
Ezinganeni ezingaphezu kwezinyanga ezi-4 ubudala, umthamo ungama-120ml
Idizayini ehlakaniphile, i-anti-flatulence, imibala edonsa amehlo
Igama Brand: Munchkin – USA
Inkomishi yeLatch yenza kube lula ngengane yakho ukuthi ishintshe ekunceliseni ibhodlela. Izinkomishi zokuphuza zizosiza nengane yakho ukuthi ingene emkhubeni wokubamba inkomishi yodwa. Ushintsho luhlala lukhathaza umama nengane, kodwa indebe ye-Latch ngeke isazizwa ngaleyo ndlela, umntwana uzozibamba kalula futhi aziphuze yedwa. Idizayini yesibambo ilingana nesandla somntwana, kulula ukuyibamba, ifindo elithambile le-silicone nokuvaleka kokuhlanzeka kuzoba lula ukuthi ingane yakho ikusebenzise ekhaya noma ngaphandle.
Xem Thêm Mẹo sử dụng dấu khác (≠) trong Excel cực đơn giản, chi tiết | Muasalebang
– ingono ye-silicone ethambile ayizilimazi izinsini futhi iyanwebeka.
– Isibambo sibanzi futhi siyasuswa, silungele izandla ezincane zengane, esilungele ukusihlanza.
– Ivalvu yokungenisa umoya isiza ekuvimbeleni ukubhodla ukuze kuvinjwe umoya ukuthi ungangeni, inciphise izimpawu zokubhodla futhi yenza umntwana aphelelwe amandla lapho ephuza amanzi.
– Kunesivalo esivaliwe ukugcina umbele uhlanzekile.
– Izinto zepulasitiki eziphephile, i-BPA yamahhala.
– Kukhona ukuhlukaniswa kwe-ml ecacile ukusiza umama ukuthi abone inani lobisi/amanzi ingane ezowaphuza.
– Okwezingane +4 izinyanga.
8. Philips – Avent .Drinking Cup
I-silicone spout ethambile ukuze uphuze kalula.
Ibhodlela linomumo we-wavy ukuze libambe kalula nokubamba okuqinile
Umpompi we-silicone ye-valve yendlela eyodwa kulula ukuhlanganisa futhi awuvuzi uma ibhodlela litshekele phansi.
Isiqukathi sikathayela sivumela ukubamba kalula kwezandla ezincane zengane.
Umkhiqizo uthenjwa omama abaningi emhlabeni wonke ngezingane zabo.
I-Philips Avent 551.05 Ibhodlela Lokuphuza Ingane (200ml) elinepulasitiki yekhwalithi ephezulu, engenayo i-BPA, ngakho alinangozi nhlobo empilweni futhi lihlangabezana nezindinganiso eziphakeme zenhlanzeko.
Umkhiqizo unomklamo we-nozzle othambile futhi oguquguqukayo owenza kube lula ukudonsa, ulawule ukugeleza kahle ukuze ingane ingaminyanisi noma imunce amanzi ngaphandle kokuchichima. Isiqukathi sikathayela sivumela ukubamba kalula kwezandla ezincane zengane.
Ibhodlela lokuqeqesha lingahlanzwa ukuze lihlale lihlanzekile. Zonke izingxenye ziwasheka kalula.
Izintengo zomkhiqizo ku-Tiki zibandakanya intela esebenzayo. Kodwa-ke, kuye ngohlobo lomkhiqizo noma indlela kanye nekheli lokulethwa, kungase kube nezindleko ezengeziwe ezifana nezindleko zokuthumela, izinkokhelo ezengeziwe zezimpahla ezinkulu, …
9. I-DISNEY Drinking Cup
Igama Brand: Disney
Isithombe: inkomishi yekhathuni enhle
Material: 304 ngaphakathi nangaphandle
Ukucubungula ngokwezifiso: Yebo
Ukusebenza kwe-insulation: amahora angu-0-6
Impahla ye-PP, i-Tritan iqinisekisa ukuphepha ukuze izingane zisebenzise, ​​ukuklama ngesibambo kwenza kube lula ukuba izingane ziphuze.
Futhi ikakhulukazi kukhona utshani obukhishwayo ngaphakathi kwendebe, lapho umntwana efunda ukuncela, vele unamathisele.
Umkhiqizo ulula futhi kulula ukuwusebenzisa. Uma ingane yakho isikhulile, vele ususe utshani bese uyisebenzisa njengengilazi yamanzi evamile
Ngemiklamo yezinhlamvu ezihlekisayo efana ne-Pooh Bear, i-Mermaid yezingane ezingayikhetha kalula, usalindeni, thenga manje, Mama.
10. I-Farlin Drinking Cup
I-PP ephephile futhi eqinile kanye nempahla ye-silicone
Idizayini enhle, isibambo esikahle
Ipayipi le-Optimum anti-spill suction
Ezinganeni ezinezinyanga eziyi-9 nangaphezulu; Umntwana ufunda ukuphuza ngotshani.
Ihlangabezana nezindinganiso zokuphepha ze-European Union.
Izithako: I-Polypropylene, ama-Silicone straws, i-BPA-free, ehlangabezana namazinga okuphepha e-European Union (EU).
– Nge-anti-spill function ukusiza izingane ziphuze amanzi ngokunethezeka ngaphandle kokuhlunga okungcolile.
– Anti-spill ngisho sibheke phansi.
– Uketshezi luphuma kuphela lapho umntwana encela ngokuqondile emlonyeni, esiza umntwana ukuba alusebenzise ngokuphepha, abazali akudingeki bakhathazeke ngokuthi ingane iklinywa.
– Umkhiqizo uklanywe ngotshani obuthambile ukuze usize ingane yakho imunce amanzi kunoma iyiphi indawo.
Imibala egqamile isiza izingane ukuba zithuthukise umcabango.
– Hlanza ngemva kokusetshenziswa ngakunye.
Ngenhla kunohlu lwemikhiqizo eyi-10 ehamba phambili yenkomishi yokuphuza izingane. Ngethemba ukuthi izihloko ezimbalwa zizoba iziphakamiso eziwusizo kuwe. Uma udinga ukuxoxa nokuhlola, sicela usebenzise isigaba sokuphawula esingezansi.